Fisaintsainana ny mpivarotra Tontolo Izao ny entana - ny tsara indrindra Forex EA | Expert Advisors | FX Robots
HomeForex SchoolFisaintsainana ny mpivarotra ao amin'ny Tontolo Izao ny entana
Miaraka amin'ny solosaina, ny fifandraisana aterineto, ary ny sasany renivohitra ara-barotra, raharaham-barotra na ny safidy hoavy entam-barotra dia fomba hafa mba hiezaka ny hanao vola. Saika ny olon-drehetra manana fahalalana ny entana. Misy fifanarahana hoavy ho an'ny vary, omby, vola vahiny, volamena, volafotsy, zanabola, ary na dia tahiry tsena eo ho eo ny mba hilaza vitsivitsy. Sisiny tantara dia natao ho an 'ireo kely capital ary tsy misy leverage ampy natolotry ny entam-barotra hoavy fifanarahana. Ankoatra izany, vidin-javatra no manidina manodidina ... be dia be.
Misy fatiantoka ny varotra entana. Ny ankamaroan'ny entam-barotra avy amin'ny fifanarahana haben'ny fitsipika izay matetika loatra ny mpampiasa vola lehibe amin'ny latsaky ny $ 5000 in-drenivohitra. Open fanombanana ny loza dia mety ho sarotra ho an'ny mpivarotra entam-barotra. Tsena fironana miova tampoka noho ny tondra-drano, hain-tany, hafanana, mangatsiaka hafanana, ady, hitan'ny vaovao, vaovao sy miovaova teoria torohevitra. Market tsy ampoizina mitranga matetika ary rehefa manao, lasan-ko babo kely afaka ny ho tonga sy mandeha haingana ...!
Varotra entana sasany ihany mandritra ny ora voafetra aza manolotra ny ankamaroan'ny entana elektronika varotra ankehitriny. Ankoatra izany, no mameno ny tsena baiko mety ho ratsy lavitra noho nomanina. Amin'ny toe-javatra sasany, dia mety hisy ny tsy fahampian'ny mpividy na mpivarotra, ary mitaky andro maromaro mba avy amin'ny toerana. Mpivarotra amin'ny fahaverezana tsena dia mety hiafara amin'ny sisiny antso, toy ny tsena hamely azy mandeha lavidavitra kokoa rehefa Fivoahan'ny ny tsena.
Tato anatin'ireo taona faramparany nisy vaovao mpilalao ao amin'ny entam-barotra tsena izay mahatonga entam-barotra maro kokoa riskier tsena mikorontana. Goavana be ny vola dia vola ao amin'ny entam-barotra entana alalan'ny fanondroana vola. Mety hanapa-kevitra Fund mpitantana fa 5% ny arivo tapitrisa dolara portfolio-dia tokony ho vola amin'ny andavanandro, ary ireo entana dia hatao fara fahakeliny isan-taona na inona na inona niova ny vidiny. Raha, ho toy ny kely speculator, dia hamidy, na shorted fifanarahana iray ny vary, ohatra, andro vitsivitsy talohan'ny rehefa manapa-kevitra mpitantana ny petra-bola hividy 10,000 fifanarahana, dia aza manantena mba hahazoam-bola amin'ny raharaham-barotra. Ianao toy ny trondro kely nandeha hamely an'i ankehitriny ao amin'ny làlan trozona.
Noho izany entana tombantombana manolotra fahafahana ho an'ny ara-barotra sy ny fatiantoka tombony, fa noho izany sarotra ny mifehy ny loza, dia mety tsy ho tsara ho an'ny mpampiasa vola kely. Noho izany antony izany entam-barotra maro mpivarotra hoavy izao varotra entam-barotra sy ny safidy na ny tahiry. Dia manaraka hojerentsika safidy.